I-Google Pixel 2 ayiyi kuba namanzi kwaye iya kuba nekhamera ephuculweyo kunye ne-CPU | I-Androidsis
I-Google Pixel 2, ngaphandle kokungangenwa ngamanzi, iya kuba nekhamera ephuculweyo kunye ne-CPU
I-Google Pixel ibizwa ngokuba yi-unicorn, eso silwanyana singcwele siyaziwa ukuba sikhona, kodwa ukuba phantse akukho mntu ukwazileyo ukuyibona. UGoogle kuya kufuneka achaze isizathu sokunqongophala kwesitokhwe sale fowuni ephathekayo eye yamangalelwa ngabasebenzisi abaninzi kwaye leyo ikhokelele abanye ukuba bayithengise ngexabiso eliphezulu kwiAmazon.
Ukuba amarhe malunga nokumelana namanzi afike izolo yeGoogle Pixel 2, ngoku enye iyavela ebandakanya iindaba ezingaphezulu zokuguqula umntu oza kungena ezihlangwini zenye yeefowuni ezilungileyo ze2016 kwenye ifowuni yokuqhawula intambo kulo nyaka we-2017. IPixel 2 eya kuba ngcono, ngokukhawuleza nangakumbi.
Ingxelo entsha icacisa imithombo yangaphakathi apho igcinwa khona nguGoogle ukuvavanya iinguqulelo ezahlukeneyo zePixel 2 kwaye enye yeeprototypes yaziwa ngokuba yiPixel 2B, eya kuba yinto ephantsi ye-flagship egxile kwiimarike ezisakhulayo.
Kwiinkcukacha ezikhoyo malunga nePixel 2, ingxelo icacisa ukuba ayizukungena manzi, uphawu olukhoyo kuninzi lweeflegi kwaye lalingakhathalelwanga kwiPixel yoqobo. IPixel 2 iya kuba nayo Isiqinisekiso se-IP67 okanye se-IP68, eya kukuvumela ukuba ungene emanzini ukuya kuthi ga kwi-1 ukuya kwi-1,5 yeemitha kwimizuzu engama-30. Isatifikethi esiya kufunyanwa yiGPS S8 yokubonelela ngeyona nkcaso inkulu malunga noku.
Iipixelot protesypes ziyavavanywa ngeetshipsi zeSpapdragon 2X, ngaphandle kokusebenzisa iichips zeIntel. Akukho zinkcukacha zinikezelwayo malunga nescreen sefowuni ngokokwazi kwethu ngoku, nangona ikhamera, enye yezona mpawu zibalaseleyo zePixel yoqobo, iya kuba yenye yeenjongo ze-G enkulu ukubonelela ngokusebenza ngcono. Oko kuya kuphuculwa kuya kuba ukufota kwiimeko eziphantsi zokukhanya.
Ixabiso lePixel 2 liya kunyuka malunga nama-50 eedolaNgelixa "ukungena" ngePixel kuya kubiza kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Google Pixel 2, ngaphandle kokungangenwa ngamanzi, iya kuba nekhamera ephuculweyo kunye ne-CPU
Ialfabhethi ibhengeza ukukhula kwama-22% kwi-Q2016 XNUMX
I-Hangouts ye-Android ifikelela kuguqulelo lwe-16.0 ngezi ndaba